Phil Schiller က Apple ကို Android နှင့်၎င်း၏မျက်နှာဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုဝေဖန်ခဲ့သည် Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | NOTICIAS, လဲ tutorial
ကျော်ကြားသော Apple အမှုဆောင်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်၏ဒုတိယဥက္ကဌ မကြာသေးမီကဖီးလ် Schiller Android ဖုန်းများအတွက်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဝေဖန် မင်းဘယ်သူထင်လဲ။ ချီးမွမ်းပြီး iPhone X နဲ့ Face ID ။
ဤရွေ့ကားထုတ်ပြန်ချက်များလူသိများခဲ့သည် တောက်ပသော siteသော သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာသူ၏ပြိုင်ဘက်များကအနည်းဆုံးဤအပိုင်း၌ "နို့စို့ခြင်း" နှင့်အိုင်ဖုန်းများတွင်ဤဒေသတွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်သို့သော်သူတို့သည်အမှန်တကယ်ပင်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်ထင်ရှားသောဘုရင်များလော။ ကောင်းပြီ၊ ဒီကနေ Androidsis ကဒါဘယ်လောက်မှန်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
သတိပြုသင့်ပါတယ် Phil Schiller သည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ၏ကမ္ဘာအနှံ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အမှုဆောင်ဒုဥက္ကpresident္ဌဖြစ်သည် အကိုက်ပန်းသီး၏။ ကောင်းပြီ, ဒီထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဒီ caliber ၏ဇာတ်ကောင်သည်သူ၏ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်သောတယ်လီဖုန်းများအကြောင်းကိုမပြောတတ်ကြောင်းမျှော်လင့်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်, အစား, သူကသူ့အနေအထားကိုဂုဏ်သိက္ခာကိုပေးရဖို့အတန်ငယ်မျိုးချစ်စိတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အတည်ပြုချက်မှာ Phil Schiller မှပြောကြားခဲ့သည်မှာ iPhone X ဖြစ်သည် "လာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွက်စမတ်ဖုန်း"။ သူကပြောသည်နှင့်အတူ: "ဒါကစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက်လား Apple အတွက်ပဲလား"သူကရယ်မောပြီးပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် အိုးငါသာစဉ်းစားမိတယ် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောအရာများကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့သည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်မည်ဆိုလျှင်သူတို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့တွေတကယ်ကောင်းကောင်းလုပ်ရင်တခြားသူတွေကငါတို့ကိုကော်ပီကူးချင်ကြတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, iPhone ၏လက်ရှိမျက်နှာမှတ်ဉာဏ်သည်သူတို့၏ Touch ID အဟောင်းထက်များစွာသာလွန်သည်: နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာလုပ်နေတာက privacy လုံခြုံမှုကိုလုပ်ဖို့ပိုလွယ်အောင်လုပ်တာပါ။ ဒါကြောင့်ငါတို့အားလုံးကလုပ်ချင်ကြတယ်။Schiller က“ Face ID ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်။
သူကအက်ပဲလ်၏ Face ID၊ မျက်နှာနှင့်မျက်ဝန်းကိုအခြားစမတ်ထုတ်ကုန်များထံမှအသိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုမီ၎င်းတို့သည်“ နို့စို့” ဟုအထူးပြောဆိုခဲ့သည်။ "သူတို့ကအားလုံးစို့".
1 Huawei က Apple ၏ Face ID ကိုလှောင်ပြောင်သည်
2 iPhone X ရဲ့မျက်နှာမှတ်မိပုံကဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။
Huawei က Apple ၏ Face ID ကိုလှောင်ပြောင်သည်
အရင်ကငါတို့တွေ့ခဲ့တယ် Huawei ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများသည်သူ၏ Face ID ကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင် iPhone အသစ်ကိုမျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုခြင်း၏ရိုးရှင်းမှုကိုပြသခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ Huawei Mate 10 ကိုသူ့ရဲ့စွမ်းရည်မြင့် Kirin 970 ပရိုဆက်ဆာနဲ့အတုထောက်လှမ်းမှုအတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းကိုပြသလိုက်ပါတယ်။
ကြော်ငြာတွင် ၁၀ စက္ကန့်ကျော်မျှကြာသောဗီဒီယိုသေးသေးလေးတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ စမတ်ဖုန်းဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လူရွှင်တော်ရုပ်ပြောင်ကာတွန်းကိုကြည့်နိုင်သည်။ iPhone X သည်မအောင်မြင်သော Face ID ကို အသုံးပြု၍ စက်အားသော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ။
ဗီဒီယိုနှင့်အတူပါသောစာသားကပြောပါတယ် “ ဒီအချက်ကိုရင်ဆိုင်ကြရအောင်။ လူတိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုအသိအမှတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူး။ #TheRealAIPhone ဖြင့်အနာဂတ်ကိုသော့ဖွင့်ပါ။ 16.10.2017 "Huawei သည်ထိုနေ့၌ Mate 10 နှင့်အခြားအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုကြေငြာခဲ့သည်။
iPhone X ရဲ့မျက်နှာမှတ်မိပုံကဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။
လက်တွေ့ကျကျပြောရလျှင် iPhone ၏မျက်နှာမှတ်မိနိုင်မှု Face ID သည်လုံးဝမဆိုးပါ။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်ဝေဖန်မှုကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါ။
Phil Schiller ကရေးဆွဲထားသော iPhone ၏ Face ID သည်မလုံလောက်သေးပါ။ သင်မျက်နှာပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်အကာအရံများသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမရှိခြင်းကိုသင်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
သော်လည်း ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအခြေခံတဲ့နည်းပညာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်၊ ဒါဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာကို ၀ န်ခံရမှာပါ။ Apple ၏အဆိုအရ၎င်းသည်မျက်နှာ၏မြေပုံ၊ ရရှိသောအနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်နှင့်၎င်း၏အနက်တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ အချိုးမညီစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်မျက်နှာ၏မမြင်နိုင်သောအချက်များ ၃၀၀၀၀ အထိကိုသိမြင်စေသည်။
Secure Enclave တွင်ကာကွယ်ထားသော A11 Bionic ချစ်ပ်၏အာရုံကြောအင်ဂျင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောမြေပုံနှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်ကိုသင်္ချာကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းကာသက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဒေတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အရာရာတိုင်းမှန်ကန်စွာကိုက်ညီပါကစက်သည်အလိုအလျောက်သော့ဖွင့်ခြင်းခံရလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်သော့ခတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ကောင်းပြီ၊ နောက်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နောက်ဗီဒီယိုအရ Apple နည်းပညာသည်လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုအတွက်ဆက်လက်တီထွင်ရန်လိုအပ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏နိဂုံးသည်ဗီဒီယိုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ "iPhone X ရဲ့ Face ID က Apple ကြေငြာသလိုမလုံခြုံပါဘူး"
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Apple ရဲ့ Phil Schiller က Android နဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုဝေဖန်လိုက်သည်